Big Money Slingo Ibhonasi |
Big Money Slingo Ibhonasi
Uma fan of Slingo imidlalo okuyizinto inhlanganisela Slots kanye bingo ngokuyisisekelo, ke Big Money Slingo Ibhonasi nakanjani kuwufanele ngizame. Kukhona hhayi elilodwa 6 izindawo lapho ungakwazi ukudlala lo mdlalo. Ungakhetha wakho uthathe okukhethayo ngaphambi kokuqala umdlalo. Neqiniso ngokuwina lokhu Slingo omkhulu lapho ungakwazi ukunqoba kuze £ 250.000 Jackpot. Ukuze athole lo £ 250.000 Jackpot, udinga ukuba ugcwalise inombolo enkulu yemigqa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kuye zenzelwe futhi akhiwa IWG Onjiniyela software amageyimu futhi baye benza umsebenzi ezinye eyisimanga kanye ihluzo kanye Gameplay.
Google Big Money Slingo and win £ 250.000 Jackpot
Lokhu Slingo nje alifani nelamuntu. Ngaso nje kokuqala umdlalo, unikezwa ithuba lokukhetha phakathi izindawo eziyisithupha ukudlala kusuka. Lezi zindawo yilezi Jokers Hamlet, Fields Golden, Royal Ihlathi, abashushumbisi Cove, Diamond Peak noLucky Gulch. Ngayinye yalezi zindawo has a izindleko ezahlukene ukuthi iqala kusukela njengoba low 50p ngoba Hamlet le Joker futhi ifinyelela ku £ 15 ukuze Lucky Gulch. Gameplay ngayinye kulezi zindawo liyafana. Umahluko owokuthi imali engumklomelo kanye esibonakalayo umdlalo. Kukhona ithuba ngawe ngiyothatha into £ 250.000 jackpot ekupheleni lo mdlalo.
Big Money Slingo Ibhonasi Ukudlala amageyimu
Gameplay yalesi game okumangalisayo silula. Ngokushesha uma uqala, uzonikezwa 6 ongakhetha yezindawo ofuna ukudlala ngesikhathi. Ngemuva kokuthi ukhethe okukodwa eziyisithupha ongakhetha, uzobe bayiswe esikrinini main. ukubheja ngamunye ikunika 6 osebenzisa futhi wena nje ukwenza inombolo enkulu yemigqa. Manje kufanele chofoza inkinobho isiqalo futhi kufika 4 Jokers uyoboniswa ebhodini lakho. spin ngamunye kuyofakazela kwembule inombolo noma spin khulula. I jokers ukuthi kwanezelwa ekuqaleni Gameplay esiyoba ukuthi ibhokisi futhi ngeke ube ukumaka zibayise ethebuleni. Umugqa ngamunye kuyodingeka umcibisholo endaweni yekhanda laso ezibonisa inani cash ukuthi ungakwazi ukunqoba by ancintisanayo ukuthi umugqa. Ungakwazi uwine esikhulu njengoba £ 250.000 jackpot by kokuphothula lezi imigqa.
Slingo anezinye imithetho eyisimanga kanye ihluzo ekhangayo. Lo is ngokusobala khulu incelebana isixuku nge omkhulu £ 250.000 jackpot kanye Gameplay lula. Wena ngokuqinisekile uzoba kumnandi ukudlala le uma lokudlala imidlalo yebhingo noma slot fan.